mental care – စာမကျြနှာ 18 – Healthy Life Journal
All posts tagged "mental care"
ငိုကြွေးခြင်းက စိတ်၏ ထွက်ပေါက်
လရိပ်မေ လူတွေက အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့် ငိုကြပါတယ်။ တချို့လူတွေက ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်း၊ ၀တ္ထုစတာတွေဖတ်ပြီး ငိုကြွေးတတ်ကြပါတယ်။ ငိုကြွေးတာကို လေ့လာလိုက်တဲ့အခါ မျက်ရည်ကျတာထက်ပိုပြီး ကောင်းတဲ့ ရလဒ်တွေကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ စိတ်ပညာရှင်က ဆိုပါတယ်။ ငိုတာက ဆက်သွယ်ရေးရဲ့ အကောင်းဆုံး သင်္ကေတ တစ်ခုဖြစ်တယ်...
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) စိတ်ရောဂါဝေဒနာကာကွယ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေကို အဓိကအားဖြင့် သုံးမျိုးခွဲခြားထားပါတယ်။ ၄င်းတို့ကတော့- (၁) အခြေခံကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်း (Primary Prevention) (၂) ရောဂါဆိုးရွားမလာအောင် ကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်း (Secondary Prevention)နဲ့ (၃) မသန်မစွမ်းဖြစ်မှုကို ကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်း...
သ၀န်တိုတာက စိတ်ရောဂါလား . . .
မေး – ချစ်သူအပေါ် သ၀န်အရမ်းတိုတဲ့စိတ်၊ အပြစ်ကို အမျိုးမျိုး ရှာတတ်တဲ့ စိတ်က စိတ်ရောဂါနဲ့ ဆိုင်ပါသလား ဆရာ။ ….. နေခြည်၊ ကျောက်တံတား။ ဒေါက်တာဦးဇော်စိန်လွင် ဆေးရုံအုပ်ကြီး(ငြိမ်း) (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မှဖြေကြားသည် ၊၊ ဖြေ – သ၀န်တိုတယ်ဆိုတာ-...
ဂိမ်းဆော့လွန်းတဲ့ ကလေးကို ဘယ်လို ထိန်းချုပ်သင့်သလဲ . . .
ဒေါက်တာဦးဇော်စိန်လွင်(ဆေးရုံအုပ်ကြီး-ငြိမ်း) စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး “သား . . စာလုပ်ရမှာလေ . . ကျောင်းက ပေး လိုက်တဲ့ အိမ်စာတွေမလုပ်ရသေးဘူးလေ . . ဂိမ်း ဆော့တာ ရပ်လိုက်တော့” မနှင်းသူက ဂိမ်းဆော့နေတဲ့ သားကိုလှမ်းသတိ ပေးလိုက်သော်လည်း...
သရဲကြောက်သူ . .
မေး. ကျွန်မက ဒီအတိုင်းဆိုမကြောက်တတ်ပါဘူး ဆရာ။ သရဲကားဖြစ်ဖြစ် ကြည့်ပြီးရင်၊ သရဲအကြောင်းပြောတဲ့ ဇာတ်လမ်းကို FM ကနေနားထောင်ပြီးရင် ည ညမှောင်တာနဲ့ ကြောက်နေပါတယ်။ အဲဒီဇာတ်လမ်းထဲက မြင်ကွင်းအတိုင်း ပုံဖော်ပြီးမြင်ရင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပိုကြောက်လာတယ် ဆရာ။ အဲဒါကြောင့်တစ်ယောက်တည်း မနေရဲဘူး၊ ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာတောင်...
ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှ လွတ်ကင်းရပါလို၏ . .
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊ ဦးမြင့်မှာ ငယ်ငယ်ကတည်းက လူတောမတိုးတဲ့ အရာလို့ပဲဆိုရမယ့် ကြောက်စိတ်တစ်ခု ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒါကတော့ ကုန်တိုက်ကြီးတွေ၊ Shopping Mall ကြီးတွေ၊ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေသွားရင် အလုံပိတ်ထားတဲ့ ဓာတ်လှေကားတွေကို မစီးရဲတာပါပဲ . .။ အဲဒါတွေအနား...